သူငယ်ချင်းနေထိုင်ရာဒေသရဲ့ လေထုအရည်အသွေးက ဘယ်လိုလို့ထင်လဲ
3412 responded out of 7884 polled
လေထုညစ်ညမ်းမှုက ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လောက်ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။
3413 responded out of 3558 polled
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လေညစ်ညမ်းမှုဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့် ဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။
903 responded out of 952 polled
လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုဘယ်အရာတွေက အဓိက ဖြစ်စေတယ်လို့ထင်ပါသလဲ?
3197 responded out of 3452 polled
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကို ဘယ်အရာက အများဆုံး အန္တရာယ်ပြုစေပါသလဲ?
3035 responded out of 3260 polled
မြန်မာနိုင်ငံရှိလေထုအရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါသလား?
2940 responded out of 3101 polled
2454 responded out of 2788 polled